धुर्कोट गाउँपालिकाको रेडियोमा शेयर हाल्ने हैन? तोकियो प्रती शेयर २० हजार रुपैँया – Gulminews
Home/अर्थ/धुर्कोट गाउँपालिकाको रेडियोमा शेयर हाल्ने हैन? तोकियो प्रती शेयर २० हजार रुपैँया
धुर्कोट गाउँपालिकाको रेडियोमा शेयर हाल्ने हैन? तोकियो प्रती शेयर २० हजार रुपैँया
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ आश्विन २७, शुक्रबार २०:०६ मा प्रकाशित
गुल्मी । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा धुर्कोटमा एफएम रेडियो सञ्चालन कार्य विधि समेत बनाईने भएको छ । अव छिट्टै कार्यविधि बनाएर रेडियो सञ्चालन गरिने र त्यस पुर्व शेयर आव्हान गरिने संयोजक खत्रीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हिजोको बैठकले प्रति शेयर २० हजार तोकेको छ । ५१ प्रतिशत रकम धुर्कोट गाउँपालिकाले रेडियो सञ्चालनका लागि ७ लाख छुट्टाएको छ । हरेक वडाध्यक्षले वडावासी संग शेयर आव्हान गर्ने छन् । शैक्षिक क्षेत्र र पत्रकारहरु विच शेयर आव्हान त्यहाँका शिक्षक दधि खनालको संयोजकत्वमा गरिने छ । देश विदेशमा रहेका धुर्कोटवासी संग प्रेस संयोजक प्रेम सुनारले शेयर आव्हानका लागि समन्व्य गर्ने बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ ।